September 2020 - Lupyo News
September 30, 2020 by Lupyo News
မနက်ဖြန်ထီ ထွက်တော့ မှာမို့ထီပေါက် ဂါထာနှင့် ပုတီးစိပ် နည်းတင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ လူတိုင်း ထီပေါက် ချင် ကြတယ်။ ဒီနည်း ကို မသုံးကြလို့ မပေါက် ကြသေးတာပါ။အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာ တော်။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာကို တင်ပေး လိုက် ပါတယ် အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ မင်္ဂလာပါ သူဌေး မင်းထီဆိုင်ကြီးမှ ကူးယူ ဖော်ပြအပ် ပါသည်။ အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာ ရှေးကျမ်းရင်း တစောင်မှာ ဖော်ပြထားပြီး အစွမ်း ထက်မြက် တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပါယ် အတိုချုပ်က“ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ရှိစဉ်ကေ ကာဏ္ဍဝေန မထေရ်ကြီးသည် ပထမ စာရေး … Read more
စီးပွားကျဆင်းနေပြီး ဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီလား? ဒါလေး လုပ်လိုက်ပါ အားလုံး အဆင်းပြေသွားပါလိမ့်မယ်
စီးပွားကျဆင်းနေပြီး ဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီလား? ဒါလေး လုပ်လိုက်ပါ အားလုံး အဆင်းပြေသွားပါလိမ့်မယ် အကယ်၍ သင်ဟာ စီးပွားရေး လူမှုရေး ကျန်းမာရေး အဘက်ဘက်မှာ ချို့ယွင်းလာနေပြီလား။ အလုပ် အကိုင် အခက် အခဲ ဖြစ်နေလား သေချင်လောက်အောင် စိတ်ဓာတ်ကျနေလား ဘဝမှာ အခက်အခဲမျိုးစုံ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေရပြီလား စိတ်မပူပါနဲ့ မဟာသမယသုတ် ပရိတ်တော်မြတ်ကြီးကိုသာ ယုံကြည်လေးနက်စွာ ပူဇော် လိုက်ပါ။ မဟာသမယသုတ်ပ ရိတ်တော်မြတ်ကြီးကိုစ ပူဇော်ကာစမှာ အလွတ်ရစရာမလိုပါဘူး စာအုပ်ကို ကြည့်ပြီး ပူဇော်တတ်ရင်ပဲ ရနေပါပြီ စပြီးပူဇော်ကြည့်ယုံနဲ့မိမိရဲ့စိတ်အနေဘယ်လောက်အေးချမ်း လာတယ်ဆိုတာ သိလာရပါမယ်။ ပူဇော်တဲ့သက်တမ်း ရလာတာနဲ့အမျှ ဘက်ပေါင်းစုံမှ အဆင်ပြေမှုတွေ တိုးတတ်မှုတွေ မထင်မှတ်ထားတဲ့ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီးရလာပါလိမ့်မယ်။ လောကီချမ်းသာတင်ပဲလား မဟုတ်သေးပါဘူးနော် လောကုတ္တရာအတွက်ကြီးမြတ်သော အထောက်အပံ့ကောင်း တစ်ခုကို မိမိလက်ဝယ် … Read more
ကံနှိမ့် ကံပိတ် နေသူများအတွက် ကံခေါ်နည်း ကံ ပိတ်ရခြင်း အကြောင်းကတော့ အလွန်နက်နဲပါတယ် လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူ အနေအထိုင် နေအိမ်အခန်း ထားသိုမူ့ အမှားအယွင်း အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း အမှားအယွင်း ဘုန်းကံနိမ့်စေမူ့ အပြုအမူတွေအပြင် အတိတ်အကုသိုလ်ကံရဲ့ အတားအဆီး အစရှိသဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ရှိနေနိူင်ပါတယ်။ အခုပြောမယ့် နည်းကတော့ အဲဒီ အတားအဆီးတွေ ကျော်လွှားပြီး မိမိစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ လုပ်နေသမျှ ကံပိတ်တာတွေ တဖြည်းဖြည်း အားနည်းစေပြီးကောင်းကံတွေ အကျိုးပေးလာစေမှာပါ။ အခုလုပ်ရမယ့် အရာတွေကို ပြောပြပါမယ်။ ၁။ မိမိပြုခဲ့ဖူးသမျှသော ကုသိုလ်တွေထဲက မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ပီတိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ကုသိုလ် ၁၁ မျိုးကို စာရွက်နဲ့ ချရေးပြီး ပလပ်စတစ် လောင်းထားပါ။ နံနက်တိုင်း အိပ်ယာထထချင်း အဲဒီစာရွက်ကို အစအဆုံးဖတ်ပြီး ကျေနပ်ပီတိဖြစ်ပါစေ။ အဲဒီစာရွက်ကိုဖတ်ပြီးမှသာ … Read more
မိန်းကလေးတစ်ယောက် တကယ်စိတ်နာသွားပြီဆိုရင်… အချစ်ကြီးရင် အမျက်ကြီး တယ်ဆိုတဲ့စကားက အမှန်တကယ်ဖြစ် နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိန်းမသားတွေအတွက် ပိုမှန်နိုင် ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို အချစ်ကြီးတဲ့မိန်းမသားတွေဟာ သူတို့ချစ်မိ တဲ့သူအတွက် ဘာမဆိုပေးဆပ်ဖို့ဝန်မလေးသလို၊ သူတို့အချစ်ကို တန်ဖိုးမထားဘဲ နာကျင်အောင် လုပ်ရင်တော့ လုံးဝလှည့်မကြည့်တော့ပဲ ကျောခိုင်းသွား တတ်လို့ပါပဲ …။ အချစ်ကြီးတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ အရှုံးပေးရတယ်လို့ မတွေးဘူး” ချစ်မိသွားပြီဆိုရင် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကရော ကိုယ်ချစ်သလောက် ကိုယ့်ကို ချစ်ရဲ့လား ၊ တကယ်ရောချစ်ရဲ့လားဆိုတာကို သံသယဖြစ် တတ်ကြပြီးကိုယ်ချစ်သလောက် ကိုယ့်ကိုမချစ်ဘူးလို့ ထင်တဲ့အခါ အရှုံးသမားလို ခံစားရပါတယ်။ အချစ်ကြီးတဲ့ သူတွေကတော့ ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ဘက်က ကိုယ့်လောက် ချစ်သည်ဖြစ်စေ၊ မချစ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်က အကောင်းဆုံးချစ် သွားပြီး ပေးဆပ် တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကို … Read more
ရည်းစားဟောင်းကို သတိရပြီးငိုခြင်းက ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေနိုင်…..
ရည်းစားဟောင်းကို သတိရပြီးငိုခြင်းက ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေနိုင်….. လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ တစ်သက်တာမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် မျက်ရည် 16.5 ဂါလန်ခန့် ငိုတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေက ငိုရတာထက် ခံစားချက်တွေကို မျိုသိပ်ထားရတာကို ပိုပြီး သဘောကျပါတယ်။ စိတ်ခံစားရလို့ ငိုခြင်းက ကိုယ်အလေးချိန်မြင့်တက်မှုကို ဟန့်တားပေးတယ် ဆိုရင် သင် ယုံနိုင်ပါ့မလား။ စိတ်ခံစားရလို့ ငိုတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးအမြတ် တစ်ခုရပြီလို့ မှတ်လိုက်ပါတော့နော်။ ရည်းစားဟောင်းကို သတိရပြီး ငိုခြင်း ကိုယ်အလေးအချိန်ကျစေတယ်လို့ ပြောရင် ယုံချင်မှ ယုံပါလိမ့်မယ်။ လူတော်တော်များများက အသည်းကွဲဖူးကြပါတယ်။ အသည်းကွဲပြီ ဆိုရင် စိတ်တွေညစ်ပြီး အစားတွေ ပိုစားမိကြပါတယ်။ အသည်းကွဲပြီး ရက်အနည်းငယ် ကြာတဲ့အခါမှာ အဝတ်အစားတွေ ကျပ်လာတာကို သတိထားမိမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် အသည်းကွဲတာက … Read more
ချောင်းခြောက်တွေဆိုးပြီး အနံ ပျောက်လာလျှင်…
ချောင်းခြောက်တွေဆိုးပြီး အနံ ပျောက်လာလျှင်… ရန်ကုန်က သမီးတစ်ဦးမေးလို့ပါ။ လည်ချောင်းက ငါးရက်လောက်ရှိပီနာတာ ကြားထဲမှာ တရက်ဖျားတယ် ချောင်းခြောက် နည်းနည်းဆိုးတယ် … အခု မနေ့ကထဲက အနံ့က ရတာရ မရတာတွေလဲမရဖြစ်နေလို့ပါ။ ကြက်သွန်နီတွေ လဲဝါးစား ပရုတ်ဆီ နဲ့ရေနွေးငွေ့လဲရှုတယ်မထူးလို့ပါ။ အနံ့ပြန်ရနိုင်မယ့် ဆေးနည်းလေးရှိရင်ပေးပါနော် ….လောဆယ်တော့ အွန်လိုင်းကနည်းတွေလဲစုံနေပါပီ… လုပ်ကြည့်တာ ရုံးကနေ ဘဏ်တွေသွားသွားနေရတော့ နေပူနဲ့ အဲကွန်းကြောင့် ပထမ အပူရှပ်လို့ဘဲထင်ခဲ့တာ ခွင့်ယူထားတာလဲ ပီးခဲ့တဲ့ အပတ်ထဲကပါ။ ဆားတစ်ဇွန်းကို နီအောင်လှော်သံပရာသီးတစ်လုံးအရည်ညှစ်ချ။လျက်ပေးပါ။ သောက်ရင်လည်းရတယ်။ ဆားရည်လည်းမကြာမကြာငုံထွေးပါ။ နလင်ကျော်တုံး သွေးလည်ပင်းလိမ်းပါ။ လျှာအရသာမသ်ိရင် ကြက်ဟင်းခါးရွက်ချေပွတ်ပါ။ အနံ့မရရင် ငြုတ်ကောင်းစေ့ကိုအပ်ဖျားမှာထိုး မီးရှို့ရှူပေးပါ။ပြန်အနံ့ရလာလိမ့်မယ်….။ ============= unicode, ရနျကုနျက သမီးတဈဦးမေးလို့ပါ။ လညျခြောငျးက ငါးရကျလောကျရှိပီနာတာ ကွားထဲမှာ တရကျဖြားတယျ ခြောငျးခွောကျ … Read more
September 29, 2020 September 28, 2020 by Lupyo News
နစ်နာစရာရှိရင် မိန်းခလေးတွေပဲနစ်နာရတာမို့ သတိလေးထားကြပါနော်…
September 28, 2020 by Lupyo News
နစ်နာစရာရှိရင် မိန်းခလေးတွေပဲနစ်နာရတာမို့ သတိလေးထားကြပါနော်… “ငါ့သမီးကို အမေမှာချင်တယ်” ငါ့သမီးလေးရယ် ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးတာတော့ ခေတ်သဘာဝမို့ အမေမပြောလိုပါဘူး… သမီးရယ် ဒါပေမယ့် မေမေမှာချင်တာက… ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ တရားဝင်လက်ထပ်ထား ခြင်းမရှိဘဲ ရည်းစားတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ထားပြီး ဓာတ်ပုံတွေ တွဲရိုက် တွဲတင်နဲ့ မေမေသူများတွေပြောလို့ အကုန်သိပြီးပြီ သမီး … သမီးရယ် … သမီးရည်းစားက တကယ်လို့သမီးနဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မရခဲ့ဘူး မယူဘူးဆို ရင် … ငါ့သမီးဘဝလေးကို ဘယ်ယောက်ျားလေးက တန်ဖိုးထားမှာလဲ…??? ပြီးတော့မေမေတို့ မျိုးရိုး ဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုလည်း ငဲ့ကြည့်ပါဦးသမီးရေ … ခုတော့ … သမီးက ငါ့ရည်းစားလေး ဘယ်လောက်လှတယ် ဘယ်၍လှတယ်နဲ့ ကြွာချင်ပြီး လိုင်းပေါ်တွဲတင်တော့ မေမေတို့ကို ပတ်ဝန်းကျင် က ပြောလာပြီ သမီးရေ မဆုံးမဘူးလား မအုပ်ချုပ်ဘူးလားတဲ့…??? … Read more
“အပျိုကြီး လူပျိုကြီး ဖြစ်နိုင်ခြေများသော လက္ခဏာ(၈)ရပ်”
“အပျိုကြီး လူပျိုကြီး ဖြစ်နိုင်ခြေများသော လက္ခဏာ(၈)ရပ်” ( ငှက်ပျောတုံးနဲ့ နှစ်ပါးမသွားချင်သူများ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်) လူတော်တော်များများကတော့ တစ်သက်လုံး FAဘဝနဲ့ နေသွားရမှာကို စိုးရိမ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ Singleဘဝကို ပျော်တဲ့လို့ ပြောတဲ့သူတွေ ရှိပေမယ့် များသောအားဖြင့်တော့ အတွဲတွေမြင်ရင် မသိစိတ်ထဲကနေ အားကျ တတ်ကြပါတယ်။ လူဆိုတာလည်း ရှုပ်ထွေးပွေလီ ဒုက္ခများတဲ့ဘဝကို မသိစိတ်က ကြိုက်တတ်တဲ့ အမျိုးပါ။ တစ်ချို့ တကယ်ကို Single ဘဝနဲ့ပဲ ပျော်တတ်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သင်ရော တစ်သက်လုံး Single အဖြစ်နဲ့ နေသွားမှာလား? အောက်ပါ လက္ခာဏာရပ်တွေ သင့်မှာ ရှိနေရင်တော့ သင်တစ်သက်လုံး Singleအဖြစ် နေထိုင်သွားရဖို့များပါတယ်။ (၁) သင်ဟာ သင့်ဘဝထဲကို လူအသစ်တွေ သိပ်ပေးဝင်လေ့ မရှိဘူး။ … Read more
အသည်းကွဲရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆေးက တကယ်ရှိပါတယ်။ ငါဒီအချိန်ကြီးကိုရအောင်ကျော်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ “ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်” ရယ်၊ ဘာအခက်အခဲပဲရှိရှိတကယ်ကိုကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ “သတ္တိ” ရယ်ရှိရင်ရပြီ။ ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာ “သူပြန်မလာခဲ့ရင်တို့၊ သူပြန်လာပါ့မလား” တို့ဆိုတဲ့အတွေးတွေထက် “ငါဘယ်လိုနေရင်ပိုအဆင်ပြေလာမလဲ” ဆိုတဲ့အတွေးတွေကိုပိုပြီးတွေးကြည့်ပါ။ လူတစ်ယောက်ကိုမေ့ဖို့က ချက်ချင်းကြီးဝုန်းခနဲ ဒိုင်းခနဲမမေ့သွားဘူး။ သူ့ကိုကိုယ်ဘယ်လောက်ချစ်ခဲ့သလဲဆိုတာရယ်၊ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာချစ်ခဲ့ရလဲဆိုတာရယ် ပေါ်မှာမူတည်ပြီး healing လုပ်ရတဲ့အချိန်ကွာသွားတာတော့ရှိမှာပေါ့။ အဲ့လိုကြိုးစားနေတဲ့အချိန်တွေအတွင်းမှာ ခဏခဏအနှောင့်အယှက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဥပမာ – တစ်လလောက်၊ နှစ်လလောက်အဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲအဆင်ပြေနေရာကနေ ဖုန်းထဆက်ချင်လာတာတို့၊ သူ့အကောင့်ကိုဝင်ကြည့်မိတာတို့၊ သူရည်းစားရတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားလူတွေနဲ့ပျော်နေတဲ့သတင်းတွေကြားရတာတို့လိုမျိုးပေါ့။ အဲ့လိုတွေဖြစ်လာခဲ့ရင် စိတ်ကိုလျှော့မချပစ်လိုက်နဲ့။ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ…သတ္တိရှိရှိနဲ့ ဆက်အားတင်းပြီးရအောင်ကျော်ဖြတ်ရင် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပေးပါ။ အမလည်းတစ်ချိန်က အဲ့ဒီအသည်းကွဲတယ်ဆိုတဲ့ကာလကြီးကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ဖူးလို့ အမပြောတဲ့စကားကိုယုံ‌ပါ…”တစ်နေ့နေ့မှာတော့…တကယ် အဆင်ပြေသွားမှာပါ” ❤ #Met ============= unicode အသညျးကှဲရငျပြောကျတယျဆိုတဲ့ဆေးက တကယျရှိပါတယျ။ ငါဒီအခြိနျကွီးကိုရအောငျကြျောဖွတျမယျဆိုတဲ့ “ခိုငျမာတဲ့ဆုံးဖွတျခကျြ” ရယျ၊ ဘာအခကျအခဲပဲရှိရှိတကယျကိုကွိုးစားမယျဆိုတဲ့ “သတ်တိ” ရယျရှိရငျရပွီ။ ကွိုးစားနတေဲ့အခြိနျမှာ … Read more